Zircon buluug ah oo loogu talagalay giraan, qoorta iyo hilqadaha - Micnaha zircon buluug - fiidiyow
Tags Blue, Zircon
Micnaha zircon buluuga ah: dhagaxa buluuga ah ee ugu dhalaalaya dahabka, oo badanaa loo isticmaalo sida giraan, silsilad iyo hilqado. Waa hadiyad qumman oo sidii giraanta hawlgelinta loogu dahaadhay dahabka cad.
Iibso dukaankayaga zircon buluug dabiiciga ah
Waxaa jira noocyo yar oo dhagax yar oo buluug ah oo midabkiisu buluug ah oo isku dhafan labadaba. Sapphire waa tan ugu caansan. Midabka buluugga ah ee buluugga ah waa midka ugu caansan calaamadaha buluugga ah, midabkuna wuxuu ka yimaadaa sumoobid oo ah topaz aan midab lahayn, waxaa si ballaaran loo helaa qiimaha soo jiidashada leh waxaana laga helaa tones light, sidoo kale dhexdhexaad iyo madow. Doorashooyinka kale ee dhagaxyo, oo ay ku jiraan tanzanite (buluugga-buluugga) iyo aquamarine (buluug buluug). Tourmaline iyo spinel waxaa laga heli karaa bulu mar mararka qaarkood, laakiin marar dhif ah.
Galka dhagaxa ugu quruxda badan
zircon waa dhagaxa dhagaxa ah ee midabada buluuga ah, muuqaalkeedu wuxuu ka sareeyaa safiir, tanzanite iyo spinel. Laakiin zircon si fiican ayuu u fahansan yahay dadweynaha guud ahaan, taasoo u muuqata inay ku wareersan tahay jariidad jamacad ah, dhagax dabiici ah oo lagu qurxiyey. Zircon waa macdan dabiici ah, Waxaan ka heli kartaa zirconium silicate in dhammaan midabada zircon, oo ay ku jiraan colorless.
Zircon buluug waa midabka ugu caansan. Midabka buluuga ahi waa natiijada ka soo baxda kuleylka loo yaqaan 'zircon brown'. Laakiin dhammaan zircons-ka buluuga ahi ma noqdaan buluug markii la kululaanayo, iyo xoogaa yar oo keliya oo leh qaab dhismeedka saxda ah ayaa u rogaya buluug marka kuleylka. Taasi waa sababta dhagxaanta badankood ay uga yimaadaan Kamboodiya.
Zitron Brown wuxuu isu rogaa buluug ka dib markii lagu daaweeyo kulaylka
Zircon dabiiciga ah waa macdan ay leedahay kooxda nesosilicates. Magaceeda kiimikada waa zirconium silicate iyo qaacidadeeda kiimikada ee la midka ah waa ZrSiO4. Foomamka 'Zircon' ee silicate waxay ku dhalaalaysaa cabir aad u ballaaran oo ah awooda sare ee garoonka oo aan la jaan qaadi karin. Tusaale ahaan, hafnium had iyo jeer waxay joogtaa xaddiga u dhexeeya 1 illaa 4%. Qaabka buluuga ah ee loo yaqaan 'zircon' waa nidaamka garabka tetragonal.
Zircon way ku badan tahay dhulka qolofta. Waxay u dhacdaa sida macdanta caadiga ah ee ku jirta dhagaxyada dabka ka baxsan, sida alaabooyinka dhuxusha ee aasaasiga ah, dhagaxyada methamorphic iyo sida miro lagu garto dhagaxyada masalan. Kalluunada waaweyn ee zircon waa dhif. Qiyaasta celceliska qiyaasta dhagaxyada waxay ku saabsan tahay 0.1 illaa 0.3 mm, laakiin waxay sidoo kale u kori karaan qiyaas ahaan dhowr santimitir, gaar ahaan maafiyada jilicsan iyo carbonatites.
Midabka zircon wuxuu ku kala duwan yahay midab la’aan, sidoo kale jaalle-dahab, casaan, bunni, iyo cagaar.
Ganacsatada xayawaanka ah qaarkood waxay ugu yeeraan "Matura diamond" tirooyinka aan midabada lahayn ee Zircon. Dadka reer Kamboodiyaanka ayaa sidoo kale ka hadlaya "Albal Pailin". In la ogaado in aysan jirin dheemman Cambodia. Pailin waa magaca gobolka ee Cambodia, xudduudda Thailand.
Micnaha zircon buluug iyo sifooyinka astaamaha
Dhalmada kale ee dhalashada bisha Diseembar
Micnaha zircon buluuga ah ayaa maskaxdaada nadiifinaya. Iyada oo qayb ka ah faa'iidooyinkeeda, dhagax-qurxankan wuxuu soo celinayaa nadiifintaada. Waxay ka bogsataa tamar aad ku haysay walwalka kala duwan. Waa mid wax ku ool ah marka la isticmaalo marka aad dareento inaad ku leedahay tamar badan oo taban ama aad lumiso kalsoonidaada.
Zirkada dabiiciga ah ee Ratanakiri, Cambodia
Waxaan sameynay dahab qurxin ah, tusaale ahaan: Giraanta buluuga ah ee siliki, silsilad, hilqado…
Xilliga buluuga ah
Zircons, ka Sri Lanka
uruurinta cusub ee dhagaxa
Ruby dhalada ka buuxay
Mooskaite casaan casaan leh
Jasiiradda lily pad